नेकपामा सहमतिको प्रयास : ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा ! – बिक्किपिडिया
Home /समाचार/नेकपामा सहमतिको प्रयास : ५ बुँदे ड्राफ्ट छलफलमा !
काठमाडौं, २१ असार। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा नेकपाभित्र सहमतिका लागि भन्दै पाँचबुदे ड्राफ्टमा अनौपचारिक छलफल शुरु भएको छ । पार्टीलाई फूटबाट जोगाउन र सहमति खोज्न भन्दै मध्यमार्गी समाधानको पहल शुरु भएको हो ।
अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आइतवार भएको भेटवार्तामा ठोस सहमति भएन । सहमतिका लागि सहमति मात्र भयो । थप सहमतिका लागि ४ जना नेतालाई जिम्मा लगाइएको छ । सहमतिका लागि दोस्रो तहका नेताहरुले पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
‘सहमतिका लागि सम्भावित मिलनबिन्दु’ नाम दिइएको ड्राफ्टलाई आधार बनाएर छलफल शुरु भएको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपाको विवाद बल्झिएको थियो ।
सहमतिका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र सहमतिका लागि ५ बुँदे ड्राफ्ट तयार भएको छ । ती ५ बुँदालाई थप व्याख्या गर्नेगरी सहमतिको प्रस्ताव तयार गर्न मध्यमार्गी नेताहरूले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा ‘सरकार संचालन संयन्त्र‘
असमान नियुक्ति बदर गर्ने,पुर्न नियुक्ति गर्ने
सहमतिका लागि अगाडि सारिएको प्रस्तावमा यसअघि भएका असमान नियुक्ति खारेज गरेर पुर्ननियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सल्लाहकारहरु तथा अन्य सुविधाका पदमा रहेका नियुक्तिमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावमा रहेको विवाद समाधानमा क्रियाशील रहेका एक मध्यस्थकर्ताले जानकारी दिए । नेकपाले सरकारको नेतृत्व गरेका ६ मध्ये २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पत्रकार साउदमाथि हातपात गर्नेलाई कारवाहीको…